Madaxweynaha Somalia Oo Ka Hadlay Warar Ku Saabsan In Calanka Somalia Wax Looga Bedelayo Dacwad Kenya iyo Ethiopia Ka Qabaan Xidigta Dhexda Kaga Taal |
Madaxweynaha Somalia Oo Ka Hadlay Warar Ku Saabsan In Calanka Somalia Wax Looga Bedelayo Dacwad Kenya iyo Ethiopia Ka Qabaan Xidigta Dhexda Kaga Taal
Muqdisho(GNN) Muddooyinkii u dambeeyay waxaa baraha Internetka ee bulshadu ku xidhiidho iyo website-yada qaar baahinayeen xogo ku saabsan in dawladdaha Kenya iyo Ethiopia dood ka qabaan Calanka Somalia, islamarkaana u baahan yihiin in wax laga bedelo gaar ahaana xidigta tilmaamaysa shanta Soomaaliyeed.
Xasan Sheekh, madaxweynaha Somalia oo ka hadlayay munaasibad loo qabtay maalinta calanka Somalia ayaa sheegay in wararka la baahinayo ee ah in calanka Somalia la bedelayo aanay waxba ka jirin oo ay yihiin kuwo been abuur ah oo lagu doonayo in shacabka lagu jah-wareeriyo.
“Warar lagu baahiyay Internet-yada ee ah in calanka la bedelayo, xiddigiitsana wax laga bedelayo waa been abuur aan sal iyo raad lahayn,” ayuu yidhi Xasan Sheekh Maxamuud oo intaas ku daray “Waa ku-tidhi-ku-teen warkaas. Waana mid loogu talo-galay in shacabka Soomaaliyeed lagu jah-wareeriyo.”
Munaasabada lagu xusayay 61-sano guuradii maalinta calanka Somalia ayaa waxaa goob-joog ka ahaa ra’iisal wasaaraha xukuumada Somalia, Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, Guddoomiyaha baarlamaanka, Maxamed Sh. Cismaan Jawaari iyo weliba xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Somalia.
“Waxaan rabaa inaan maanta halkan uga sheego shacabka Soomaaliyeed in calankoodu uu yahay calankii la taagay 26-kii Juun sannadkii 1960-kii. Mana jiro qorshe lagu doonayo in wax lagaga bedelo,” ayuu madaxweyne Xasan Sheekh yidhi.
Baraha Internet-ka qaarkood ayaa dhawaan lagu baahiyay warar sheegaya in calanka Somalia wax lagaga bedelayo, qorshahaas oo la sheegay in dalalka Kenya iyo Itoobiya wataan. Iyadoo wararku ay intaas ku darayaan in in labada dowladood ay u gudbiyeen ururka Midowga Afrika ashtako ah in xiddigta shanta gees leh ee dhexda kaga taalla calanka Somalia ay tahay mid xadgudub ku ah dalalkooda, oo si gaar ah loogu sheegayo deegaanno ka tirsan dalalkooda.
Ugu dabmeyn, hadalka kasoo yeedhay madaxweynaha Somalia ayaa noqonaya kii ugu horreysay ee uu warkaas ku baahiyay inuu yahay mid been abuur ah oo la doonayo in shacabka Soomaaliyeed lagu marin-habaabiyo.